120ml 170ml 180ml 200ml Round Afovoany Foana Glass Fitehirizana sakafo Tantely vatomamy fitoeran-jiro amin'ny visy sarony metaly
120ml 170ml 180ml 200ml Round Afovoany Foana Glass Fitehirizana sakafo Tantely Candy fitoeran-jiro siny hoditra misy sarony
* Vidiny mitombina: Izahay no mpanamboatra fitaratra matihanina, ny fitrandrahana mivantana dia afaka mampihena ny vidiny.
* Fanaterana haingana: Mandefa haingana kokoa noho ny namanay izahay.
* kalitao azo antoka: fanaraha-maso hentitra momba ny kalitao manomboka amin'ny akora ka hatramin'ny vokatra vita.
* Serivisy: serivisy OEM na ODM.
* Fampiharana: Fampiasana sakafo
110 ml 3.5 oz 255ml 8.5oz 350ml 11.5oz Tavoahangy fitaratra toaka divay ranom-boankazo kafe vera tavoahangy zava-pisotro
♥Tanjona maro:Tavoahangy zava-pisotro misy kapoka tsy misy na inona na inona misy satroka tsara ho an'ny fitehirizana saika karazana zava-pisotro rehetra! Tsara ampiasaina amin'ny ronono, rano, ranom-boankazo, labiera, kojakoja sakafo maraina, cocktails, dite, zava-pisotro, manao labiera, tantely, kafe, akanjo salady, kefir, kombucha, fermented Ny zava-pisotro sy ny maro hafa dia fomba tsara hampiasana tavoahangy kaopy smoothie mba hahagaga ny vahiny, fanomezan-tsoavaly, fanomezana fety.
♥Fitehirizana mora amin'ny sarony tsy misy rivotra:Tavoahangy misy tavoahangy azo antoka, tavoahangy fitehirizana tsara indrindra ho an'ny salady, ary bbq ivelany, manangom-boankazo ny ranom-boankazonao manokana, mitondra ny sommoth anao na aiza na aiza tianao, mameno ny zava-pisotro tianao indrindra toy ny ronono, rano, ranom-boankazo sy ny maro hafa, aza manahy ny hivoaka. , tsy misy leak miaraka amin'ny sarom-bilantsika, mankany amin'ny piknik, ny famafazana ahi-dratsy sy ny fety, akanjo amin'ny fotoana rehetra.
♥Tsara kalitao:Namboarina avy amin'ny vera avo lenta amin'ny sakafo izay tsy vitan'ny hoe mahatohitra ny hafanana mahery na ny hafanana mangatsiaka, Vita amin'ny vera mavesatra, bpa maimaim-poana, tsy misy poizina, fisotro sy fitehirizana azo antoka! miantoka safidy fitahirizana ara-pahasalamana azo antoka, azo antoka haharitra mandritra ny taona maro!
♥Classic Set: Ny endrika boribory na efajoro dia tena mahazatra! mitsitsy toerana, vahaolana fitahirizana ho an'ny zava-pisotro rehetra, menaka sy saosy, miasa tsara ho an'ny zava-manitra, anana, entana maina, tsara ampiasaina ho siny fermentation hanamboarana zava-pisotro misy anao!
♥Safe lovia:Tsy ilaina borosy tavoahangy, fa sasao amin'ny tanana ny satroka.Ny vera dia tsy mandoto na mifoka fofona ary mety tsara amin'ny zava-pisotro sy fanomanana ara-pahasalamana.
Mpanjifa orinasa boribory 8oz divay 285 ml tavoahangy toaka misy vera misy Punted Bottom
1) Tavoahangy zava-pisotro misy alikaola vita amin'ny vera avo lenta, vava tavoahangy savaivony mora raisina amin'ny endrika tsara tarehy.
3) Ny siny vera premium dia fomba tsara hitehirizana ny entanao an-dakozia sy an-trano.
285 ml Clear Bordeaux Divay fitoeran-javatra mafana vodka Brandy mangatsiatsiaka Glass divay tavoahangy misy bosoa Lids tavoahangy zava-pisotro misy alikaola
3) Ny siny fitaratra premium dia fomba tsara hitehirizana ny zava-pisotro misy anao
5) Izy ireo dia habe maro hisafidianana ho anao.Tohano ny habe mahazatra, loko, sarony
123456Manaraka >>> Pejy 1 / 19
tavoahangy diffuser volotara, siny fitaratra ho an`ny ranom-boankazo, tavoahangy vera labiera, Tavoahangy Saosy Glass Bbq, tavoahangy ranom-boankazo, zava-pisotro misy tavoahangy vera,